RNDP ပါတီကို မြန်မာမွတ်စလင်မ်ရှေ့နေများမှ တရားစွဲသင့်ပါကြောင်း | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
RNDP ပါတီကို မြန်မာမွတ်စလင်မ်ရှေ့နေများမှ တရားစွဲသင့်ပါကြောင်း
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ မြန်မာမုစ်လင်မ်ရှေ့နေကြီးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဥပမာ – ရှေ့နေကြီး ဦးသန်းတင်၊ ရှေ့နေကြီးဦကိုနီ။ အဲဒီရှေ့နေကြီးတွေ ကနေ ဦးဆောင်ပြီးတော့ အစ္စလာမ်သာသနာကို တရားဝင် စော်ကားခဲ့တဲ့ RNDP ပါတီကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီ တရားစွဲသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ တိုးတက်ရေးစာစောင် အတွဲ ၂/၁၂ မှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ကျနော်တို့ မုစ်လင်မ်တွေအားလုံး အမြတ်တနိုးထားတဲ့ အာဇာန်သံကို နွားအော် သကဲ့သို့ ဆိုပြီး ကျူးကျော်စော်ကားထားပါတယ်။ အခြား အချက်အလက်တွေလည်း အများကြီး ပါရှိနေပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စကို ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရှေ့နေတွေ၊ ကမာန်လူမျိုး ရှေ့နေတွေ၊ ပသီခေါ် ဗမာမွတ်စလင်မ်ရှေ့နေကြီးတွေ စုပေါင်းပြီး တရားစွဲဖို့ ဆိုင်းပြင်းသင့်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကုန်ကျမဲ့စရိတ်ကို ကျနော်တို့ အင်ရှာအလ္လာဟ် တာဝန်ယူပါ့ မယ်။ ဒီလောက် ပြောင်ပြောင် တင်းတင်းကြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်တဲ့ကိစ္စကို ခေါ်ယူသတိပေးယုံနဲ့ ပြီးတယ်ဆိုတာကတော့ လုံးဝ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားလွတ်တော် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေ၇း၊ဒီမိုကေ၇စီအေ၇းနှင့် လူ့အခွင့်အေ၇းဆိုင်၇ာကော်မတီ။ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အေးမောင် ခေါင်းဆောင်သော RNDP ပါတီက
(၃)နိုင်ငံေ၇းပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ တို့ကိုချိုးဖောက်လျှက်-
(က)ကမ္ဘာ့ လူသန်းပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ယုံကြည်လျှက်၇ှိသောအစ္စလာမ်သာသနာ ကို အသေ၇ဖျက်စော်ကားေ၇းသားခြင်း။
(ခ)အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ ပွဲတော်များကို ၇ှုံချစော်ကားေ၇းသားခြင်း။
(ဂ)အစ္စလာမ် ၀တ်ကျောင်းတော်များကို မလိုမုန်းထားေ၇းသားခြင်း။
(င)အစ္စလာမ်၏စွန့်လွှတ်လှူမှုဒါနအား အလွဲအဓိပ္ပါယ်ဖွင့် စော်ကားေ၇းသားခြင်း။
(စ)အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်း၇င်းသား၊ နိုင်ငံသား များအားလုံးတို့ကို၇ုန်း၇င်းကြမ်း တမ်းစွာ စော်ကားေ၇းသားခြင်း။
(ဆ)အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုးကွယ်ယုံကြည်၇ာဖန်ဆင်း၇ှင်၏နာမတော်ဖြင့် အစပြုပါအံဟူသည့် ဆုတောင်းမေတ္တာစကား၏ သင်္ကေတကိုဖေါ်ပြလျှက် တ၇ား ဥပဒေဘောင် အတွင်းမှ သမ္မအာဇီဝဖြင့် စီးပွါး၇ှာသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တိုင်း၇င်းသား၊နိုင်ငံသားများအား မလိုမုန်းထားေ၇းသားလှုံဆော်ခြင်း။
(ဇ)ဘာသာသာသနာယုံကြည်မှုမတူသူများနှင့်ထိမ်မြားလက်ထပ်ခြင်းမပြု၇န်နှင့်မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ အတင်းအဓမ္မအစ္စလာမ်ကို ယုံကြည်ခိုင်းခြင်း မပြု၇န်၊မည်သည့် အကြောင်း နှင့်မျှသာသနာအတွင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းခြင်းမပြု၇န် အစ္စလာမ် သာသနာ က ၇ှင်းလင်းပြတ်သားစွာတားမြစ်ထားပြီးဖြစ်ပါလျှက် အစ္စလာ မ်နှင့် မွတ်စလင်မ်တို့ မဟုတ်မ၇ား စွတ်စွဲအသေ၇ဖျက်ခြင်း။
(ဈ)ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ေ၇းပျက်ပြားဂ်ျ တိုင်း၇င်းသား၊နိုင်ငံသားအချင်းချင်း မုန်းတီးနားကြည်း ၇န်မီးပွားကာ ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုပျက်အောင် ၇ည်၇ွယ်ချက် ကျကျ လှုံ့ဆော်ေ၇း သားလျှက်၇ှိခြင်း၊
(ည)ဘာသာေ၇းခုတုန်းလုပ်ကာ နိုင်ငံေ၇းအမြတ်ထုတ်သည့်ေ၇းသားလှုံ့ဆော် မှု များပြုလုပ်နေခြင်း၊ အထက်ဖေါ်ပြပါလှုံဆော်မှုများကြောင်း ပြည်ထောင်စုအတွင်း ပဋိပက္ခ မီးများ ကာ လ၇ှည်ကြာစွာ အလျှံငြီးငြီးတောက်လောင်ခဲ့၇ပါသည်၊ ပြည်ထောင်စု မြန် မာ နိုင်ငံ ကြီး၏ ဥပဓိ၇ုပ်လည်းအကျည်းတန်၇ုပ်ဆိုးခဲ့၇ပါပြီ။ ကျူးလွန်သည့်ပါတီနှင့်ပါတီ ခေါင်းဆောင်များအား ထိေ၇ာက်စွာအေ၇းယူကြ၇န် ထပ်မံဂ်ျ အချိန်မနှေင်း စေလိုပါ။ဘီလူး ၇ုပ်ပေါ်နေသည်မှာလည်းကြာလှပြီဖြစ်ပါသည်။ တင်မောင်သန်း
This entry was posted on December 27, 2012, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် စစ်အာဏာရှင် အစိုးရ – အပိုင်း (၂) →